Sechiratidzo chekuti hurumende yeAmerica yakazvipira kurwisa kumbunyikidzwa kwevanhu vachinoitiswa mabasa avasingade kune dzimwe nyika, bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, rakaburitswa gwaro rechimakumi maviri rekumbunyikidzwa kwevanhu vanoendeswa kudzimwe nyika vachinoitiswa mabasa avasingade, kana kuti 20th Annual Trafficking in Persons Report, kana kuti TIP Report, musi wa 25 Chikumi.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaMike Pompeo, vakati kumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nyika, kunosanganisira kuitiswa mabasa epabonde pamwe nekushanda mamwe mabasa munhu achimanikidzwa, uye izvi zviri kuramba zvichiitika pasi rose.
“Pane zvanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingade uye kuitiswa mabasa epabonde pasi rose. Kudzikisira hunhu hwevanhu zvakadaro hazvitambirwe, tose takasikwa tiri mufananidzo yaMwari. Mabasa akadai ndeehutsinye.”
Gore rapera, mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vakamisa rumwe rubatsiro kudzihurumende gumi neshanu idzo dziri mugwaro re 2019 Tip Report.
Muna Ndira gore rino, VaTrump vakati America yakanga yadira mari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa kumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa epabonde pamwe nemamwe mabasa avanenge vasingadi kuita.
VaPompeo vakataura pamusoro pemabasa akaitwa neAmerica mukurwisa maitiro akaipa aya sezviri mugwaro re 2020 TIP Report.
“Nyika makumi maviri nembiri dzakasimudzirwa gore rino, gumi nenhatu dziri nyika dzemu Sub-Saharan Africa.”
Gwaro reTIP Report rinoburitswawo pachena nyika dzinotsigira kumbunyikidzwa kwevanhu vachinoitiswa mabasa avasingadi idzo dziri pachinhambo yechitatu.
Nyika idzi dzinosanganisira China, uko bato re Chinese Communist Party pamwe nemakambani ehurumende izvo zvinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kushanda munzvimbo dzakashata muhurongwa hwenyika iyi hweBelt and Road, uko verudzi vechi Uighurs nemamwe marudzi madiki echiMuslim vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingadi kuita muXinjiang nedzimwe nzvimbo.
Mu Cuba, hupfumi hwehurumende yaVaCastro hunobva muhurongwa hwezvehutano. Pane vanhu vekuCuba vanodarika zviuru makumi mashanu vanoshanda munyaya dzehutano munyika makumi matanhatu pasi rose. Madhokotera mazhinji ekuCuba ari munyika idzi anoti ari kumanikidzwa kushanda muhurongwa uhu.
Nyika dzakawanda dzinotambira madhokotera aya kuti ashande munyika idzi, kunyange hazvo zviri pachena kuti vashandi vezvehutano ava vanenge vamanikidzwa kunoshanda kunyika idzi, vachibatirwa magwaro avo ekufambisa, kusajekeswa kwezvibvumirano zvavo zvekushanda kunze kwenyika, uye kubhadharwa kwehurumende yeCuba nenyika idzi, madhokotera aya asingabhadharwe.
“Tinotora zvakadzama nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu nedzihurumende dzavo,” vakadaro VaPompeo. “Ibasa redzihurumende kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvenyika, kwete kumbunyikidza kodzero idzi. America haife yakabatana nenyika dzinomanikidza zvizvarwa zvadzo kuita zvisingadiwe nezvizvarwa izvi.”